Qofkii 5-aad ee loo soo xiray Masaajidkii la weeraray ee Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
Qofkii 5-aad ee loo soo xiray Masaajidkii la weeraray ee Guriceel
Degmada Guriceel oo ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa ka dhacday fal lagu weeraray masaajid ku yaal dagmadaas, waxaana loo soo xiray qofkii 5-aad maanta.
GURICEEL, Soomaaliya - Wararka naga soo gaaraya magaalada Guriceel ee ka tirsan gobolka Galgaduud waxay sheegayaan in maanta xabsiga loo taxaabay qofkii shanaad ee lagu tuhunsan yahay in uu qeyb ka ahaa weerarka ka dhacay masaajid ku yaal Guriceel, waxaana horay loo xiray afar kale oo kamida dadka deegaanka kuwaasoo si aada looga yaqaan.
Falkan lagu weeraray masaajidka ayaa dhacay habeen hore, xilli masaajidka laga akhrinayay kitaab ayey rag hubeysani soo weerareen, waxayna rasaas oodda kaga qaadeen masaajidka, inkastoo aysan dad wax ku noqon, haddana kuwii geystay falka ayaa isaga baxsaday goobta, ciidamada ammaanka ee isu jira Boolis iyo Nabad sugid ayaa iska kaashaday sidii loo raadin lahaa kuwii falkan ka dambeeyay, shalay ilaa maanta waxaa la soo xiray shan ruux oo falkan lagu eedeeyay.
Ciidamada Booliska iyo nabad sugida degmadaas ayaa xabsiga dhigay nin aad looga yaqaan Guriceel kaas oo lagu magacaabo Farxaan Ahmed Salaad Ugaas, waa qofkii shanaad ay ciidamada xabsiga dhigeen kadib markii haaben hore masaajid ku yaal Magalaadaas weerar lagu qaaday. Falkan dartiis ayaa sidoo kale loo xiray albaab gadaale ee uu lahaa masaajidka kaasoo ay kasoo galeen kooxdii weerarka geysatay, waxaana masaajidka u furan hal albaab oo laamiga dhinaciisa ku yaal.
Falkan lagu weeraray masaajidka ayaa noqonaya falkii ugu horreeyay ee ka dhaca deegaanada Galmudug iyo guud ahaan dhulka Soomaalida inta la ogyahay, waxayna dhaawacaysaa bulshada muslimiinta ah ee dhaqan deegaanka uu weerarka ka dhacay, masaajidkan ayey horay u xireen ururkii ASWJ ee ka talin jiray bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel oo ay ka suuliyeen dadka ka soo hor jeeda ee ay u yaqaanaan Wahaabiyada, kuwaasoo khilaaf xooggan kala dhaxeeyo.